Nezokungcebeleka isikhungo - ithuba elikhulu ukuchitha isikhathi ehlelekile kahle futhi uphumule nomndeni wakho, abangane noma osebenza nabo. Esikhathini eRepublic, amashumi amaningana elisekela ukuze baphumule. Kuyacaca ukuthi bonke ihluke kwezinye sipho amasevisi, izinga lokuphila kwabo kanye nendawo yezwe (edolobheni noma ethangeni bemvelo emahlathini), kanye nezinhlelo zokuzijabulisa ngamunye. Phakathi Chuvashia elisekela kakhulu okunabileko izivakashi Ukuzijabulisa isikhungo "Zaimka" endaweni Cheboksary. Siyini isizathu lesi nesithakazelo esikhulayo ukuba le database? Sizama ukuthola kulesi sihloko. Akaphishekeli ukugqoka Ukucela noma isincomo, kuphela zokufundisa nokuqwashisa.
"Zaimka": ukuzilibazisa, Cheboksary
Okokuqala, i-"Zaimka" - aliyona nje isikhungo ukuzijabulisa. Kwabe sekuvela ukuthi, lena eziyinkimbinkimbi izivakashi nge ezahlukene amasevisi izivakashi zayo, njalo kungeyisuye yena yedwa bezijabulisa, kodwa futhi impilo. Ngamanye amazwi, inkampani "Zaimka" wadala project yakhe eponymous (ngesimo ukwakhiwa kanye nenhlangano ilungiselelo lonke eziyinkimbinkimbi) "Zaimka" (ukuzilibazisa isikhungo, Cheboksary) ukudala amakhasimende wakho ezingase zibe wusizo futhi ngesikhathi esifanayo, unbanal yokuchitha isizungu ezithakazelisayo kuyajabulisa. By the way, amagama ambalwa ngesihloko.
igama abathandwayo, noma ukwazi ukufunda nokubhala ngomzuzu - ukukhuluma ngaphandle amaphutha
Igama elithi "Zaimka" engajwayelekile kuzwa eziningi. It livame ukusetshenziswa lapho uxoxa nabangane amaphutha uma usetha nangezindlela. Cishe, lokhu kungenxa yokuthi esikhathini sethu izwi kuyaqabukela esetshenziswa nokubaluleka kwalo manje akucacile ngoba iningi. Izame ngokwakho washo izwi elikhulu. Yikuphi uhlamvu we ezintathu uke ungagxili? Kuzoba elifanele yesibili "Ezindaweni ezintsha". Ngaphambili, okuthiwa endaweni khulula komhlaba, okuyinto elalihlala ilungelo lefa lokuqala, futhi ulizwi wayengumuntu kweqiniso we khulula emi Manor noma ipulazi izakhiwo.
Igama elithi "Zaimka" izivakashi ngokuvamile lisetshenziselwa ubuningi (ikakhulukazi imibuzo yohlobo: "ukuzilibazisa - Cheboksary - Zaimka"). Lokhu kuyamukeleka Enkulumweni eyayivame futhi ukuphaphalaza akuyona ikhumbula yokuthi base - a farmsteads ezimbalwa kanye nezakhiwo endaweni efanayo (okushiwo izwi yesibili). Nokho, akumelwe sikhohlwe ngesihloko zezomthetho eziyinkimbinkimbi sisebunyeni.
Uma ubheka uhlobo isevisi "Zaimka" has izivakashi, ungakwazi ngokushesha siqonde ukuthi kungani le ndawo ngakho ezifunwayo Chuvashia. Nezokungcebeleka isikhungo (Cheboksary, Zaimka) izivakashi zalo abangekho kulezi zingxenye lisendleleni noma ngamabomu abanye isikhathi eze lapha ukuze uphumule, ihhotela linikeza amasevisi ayo. Ungabuye uzisuse ehlukile guest house enkulu (ukukhetha ezintathu) abanye, uma use enkampanini enkulu.
Ihhotela yakhiwe zikaphayini okuqinile, amakamelo cozy "ejwayelekile" (Mon-Fri 1700 ruble / amahora 22, Fri-Sun 2000 ruble) kanye "Induduzo" (2700 futhi 3000).
indlu Guest - iyisonto kusukela round izingodo. Umuzi ngamunye unendlela yawo ekhishini bar wonke nemishini edingekayo (imethrikhi, efrijini, iketela), igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula, 4 okulala, yokugezela ehlukile ngisho guys on ensimini yendlu. Abazali nezingane qiniseka ukuba siqonde khona kwendawo yokudlalela yezingane ezigcwele zonke ekhaya. Lezi Cottages zenzelwe abantu 20. I iqashwe nsuku kuhluka indlu ethile futhi isikhathi ekhethiwe sokufika: kusukela 10,000 ruble 14.500.
Isakhiwo ine pool, ngokukhethekile ahlomele labo bathanda nifuna ukuyodoba futhi uphumule.
Abalandeli lokhu kuyoba poparitsja thokozani okugeza Russian (3) ihlanganise kusuka 10 kuya ku-20 (ama-ruble angu-800 kuya ngo-1100 / ihora).
eziyinkimbinkimbi-Equestrian inikeza imisebenzi ehlukahlukene Equestrian kubathandi ihhashi ogibele noma kulabo angathanda ukulufunda. Kungenzeka zihamba ihhashi, noma ungakwazi umane ujabulele ukungcebeleka ngehhashi noma wafakaza ukuzijabulisa Equestrian. Kuba yisikhathi futhi lapho isevisi ekhokhelwe, intengo engcono ucacise ngocingo noma kwi website esemthethweni.
Wonke umuntu uyokwazi ukukhetha isidlo isidlo ukunambitha kule "Tavern" uhambo ibhokisi elithi "umndeni yokudlela cuisine Russian ekhishini ehlobo kanye itiye wemboni.
"Zaimka": amasevisi angeziwe
Nezokungcebeleka isikhungo (Cheboksary, Zaimka) inikeza ukuzijabulisa eyengeziwe kanye nezinsiza, kuhlanganise:
Inhlangano ngamaholide kanye nezinsuku ezibalulekile (iyatholakala ku-site kukhona idili amahholo ambalwa).
Horse ugibele izifundo zonke abafundisi professional nesithakazelo.
Rental apholile, ukosa inyama kanye gazebos.
Umbono wakho mayelana isikhungo ukuzilibazisa "Zaimka" (Russia, Cheboksary), izivakashi kalula ushiye indawo esemthethweni. Ngokuvamile, amakhasimende uthi okumnandi, induduzo olukhuthaziwe lula, ngemisebenzi emihle futhi isimo sengqondo abasebenzi, ubuhle bemvelo nemvelo (naphezu ukusondela ukuba onguthelawayeka), kakhulu ihhashi ogibele nokunye. Ungabona izibuyekezo ngazinye futhi enganelisekile. Lapha, lokhu Eqinisweni yamjabulisa ukuthi lezi amazwana ashiywa ukubonisa, kodwa akakhishwanga.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ezokuvakasha kanye nobunjalo ukuzilibazisa isikhungo (Cheboksary, Zaimka) ngokubheka isitayela yesimanje angadle ngabuhle obutheni, ephumelelisa ezingeni eliphezulu ngokwanele wenduduzo.
Abasebenzi usebenzela edonsa amakhasimende, futhi mangisho, kuwumqondo omuhle uyaphumelela. I izivakashi zokuzijabulisa bavame ukubuyela ukusuka esigabeni izivakashi ezejwayelekile unomphela.